Ngaba Ndingasebenzisa Ukwakhiwa Kwezakhiwo zoMzimba?
Ndiyifunde amanqaku amaninzi kwaye ndicinga ukuba ukuba ungasebenzisa imigaqo yokwakha umzimba ukufezekisa amanqanaba aphantsi kakhulu e-fat fat, mhlawumbi ndingayisebenzisa kwakhona ukuze kufezekiswe ukulahleka kwexesha elide? Ukuba kunjalo, ndingayilungisa njani imigaqo yakho yokwakha umzimba ukuze unciphise umzimba? Kwakhona, ukuba ndifumana imisipha, ngaba akuyi kuphazamisa ukulahleka kwam umzimba?
Ngokombono wam, ukwakha umzimba kuyindlela engcono yokunciphisa umzimba ngokusisigxina.
Ngokuqalisa inkqubo yokwakha umzimba, ukulahlekelwa kwesisindo sakho kuya kuba sisigxina ekubeni isakhiwo somzimba singumgangatho wokuphila, kungekhona ukulungiswa ngokukhawuleza kokulahlekelwa isisindo.
Nangona iinjongo zakho zokulahlekelwa kwesisindo angeke zibe zigqithise ngokungathi zigqithiseleyo, zize zisebenzise imigaqo-mzimba efanayo esiyisebenzisayo ukwenzela ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza kodwa ekhuselekileyo. Ukongeza, ukwakhiwa komzimba yindlela ephela apho uya kufumana ukujonga okufanelekileyo kunye neetoni (ngenxa yokunyuka kwesisundu) xa ufezekisa ukulahleka kwesisindo sakho.
Ngokubhekisele kumbuzo wakho malunga nokufumana imisipha yokuphazamisa ukulahleka kwesisindo sakho, impendulo yolu xhomekeke kwindlela ojonga ngayo izinto. Ukuba unomdla wokulahlekelwa isisindo somlinganiselo, yebo, ukuba ufumana isisu, awuyi kulahlekelwa isisindo somlinganiselo ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ndifuna ukuba uqwalasele oku kulandelayo:
Ubunzima obunomdla wokulahlekelwa ngumzimba onobunzima, hhayi ubunzima bomzimba.
Njalo xa ufumana i-pounds ye-muscle, i-metabolism (isantya apho umzimba wakho uvutha iikhalori) iya kunyuka. Oku kuya kukunceda ulahlekelwe isisindo sobunzima ngokukhawuleza ekubeni umzimba wakho uzodinga iikhalori ezingaphezulu kwansuku zonke ukuze ugcine ubunzima bawo obukhoyo. Ngoko nangona ubunzima bomlinganiselo bunokuthi bube buncipha (ngenxa yokuba ufumana ubunzima besisindo), isisindo sakho seoli siya kuhla ngokukhawuleza!
Ukwakhiwa kweZakhiwo zoLondolozo lweMithwalo
Ukwakhiwa komzimba kunamalungu amabini okubaluleka ngokulinganayo: Ukuqeqesha nokutya. Ukuba awuzange uphakamise ngaphambili, nceda ukhangele kwisiKhokelo sam sokuQala kwiZakhiwo . Esi sikhokelo sizakukubeka endleleni efanelekileyo kwimpumelelo. Into kuphela oya kwenza ngayo ngokuhlukileyo kukuba xa ufika kwisiGaba esiPhakathi, nantsi isimiso oya kulandela:
Siya kukhetha iintsuku ezintathu ngeveki ukusebenza kunye nezisindo kunye neentsuku ezintathu ngeveki ukwenza i-aerobics. Emva koko siya kuba nelusuku lokukhulula ngaphandle kokuzivocavoca.
Ngokomzekelo, unokwenza imilinganiselo ngoMsombuluko, ngoLwesithathu, nakwesiLwesihlanu kwaye wenze i-aerobics engama-30 ngoLwesibili, ngeLwesine, nangeMigqibelo. Kule meko, ngeCawa ngumhla. Khumbula ukuba unokuyibeka nayiphi indlela ofuna ngayo, kodwa ndifumene le shedyuli ibe yintandokazi kubantu abaninzi.
Ngoku ndiza kukubonisa ngeendlela ozenzayo ekhaya kunye neelayibhile kuphela. Ekubeni ndifuna ukuba uyenze kwimizuzu engama-30 kufuneka sihambe ngokukhawuleza. Siza kusebenzisa i-trisets ukwenzela ukuba intliziyo iphephe (ukwenzela ukuba ioli itshiswe) kunye nokugcina ixesha. Ngaloo ndlela, asigcini nje ukuqinisa izihlunu kunye nokufumana amandla kodwa sinokufumana iingenelo zenhliziyo.
AmaTrietti ayenomsebenzi wesithathu owenziwe emva kwesinye ngaphandle kokuphumla phakathi kwabo (uhlobo olunjengokuqeqeshwa kweesekethe). Isiqhelo esiza kuyisebenzisa sakhiwa ngamatrisethi amathathu eesethi nganye nganye.
I-Triset A (Ibhokisi / I-Back / Abs):
Push Ups (ngokubhekiselele eludongeni ukuba awukwazi ukuyenza phantsi phantsi) 3 ubeka x 10-12 i-reps (akukho phumlo)
I-Arm Army Dumbbell Rows 3 iset x x reps (akukho ukuphumla)
Iinqununu 3 zibeka x 25-40reps (i-minute minute yokuphumla)
I-Triset B (i-Delts / i-Biceps / i-Triceps):
Iingqungquthela eziphakamileyo ze-Dumbbell 3 zibeka x 10-12 i-reps (akukho ukuphumla)
I-Dumbbell Curls 3 ibeka x 10-12 i-reps (akukho ukuphumla)
Izandiso zee-Triceps Extensions 3 zibeka x 10-12 i-reps (i-1 min yokuphumla)
I-Triset C (Amathanga / amanqatha / Amathole):
Izikwere 3 zibeka x 10-12 reps (akukho ukuphumla)
Ukufelwa kwama-Stickers-Legged 3 kuseta x 10-12 i-reps (akukho ukuphumla)
Inye Inkunzi Yelungu Iphakamisa 3 ibeka x 10-12 i-reps (i-1 min yokuphumla)
Qaphela: Hambisa kwi-Triset B emva kokugqiba iisethi ze-Triset A.
Hambisa kwi-Triset C emva kokugqiba iisethi ze-Triset B.
Ukuba ulandela le nkqubo, uya kumangaliswa kwiziphumo oza kuzifumana kuyo. Uyakuqonda kwakhona ukuba akukho mfuneko efunekayo ukuze uzuze (ngokuqinisekileyo akukho zixhobo ezibiza kakhulu) kwaye ukuba konke okufunekayo kukuzimisela nokuthanda ukwenza oko kwenzeke.
Khumbula ukuba ukuze uzuze, uqeqesho luyingxenye yesilinganiselo nje kuphela njengesondlo esinye isiqingatha. Ngoko ke, qi ni sekise ukuba ulandele isidlo sokuqala sokufumana ukutya esifumaneka kwisikhokelo sokuqalisa kwiCandelo loKwakha . Emva kokuba ufike kwizinga eliphakathi, ukutya kwakho kufuneka kufane nokufunyanwa kweso sampulu yokutya umzimba .
Ndiqinisekisa ukuba xa ulandela le nkqubo yokulungisa umzimba, iinjongo zakho zokulahlekelwa kwesisindo ziya kufakwa ngaphandle kwexesha.
Ukutya okugqibeleleyo kunye nesondlo kubadlali bebhola
Ngaba ngu-Donald Trump ngokwenene kwi-Twitter okanye i-Just Intern?
Indlela Imoto Yakho Inokuphila Ngaphandle Kwama-150,000 Miles
ISanta Clara GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data